मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, के विषयमा हुँदैछ छलफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, के विषयमा हुँदैछ छलफल ?
२०७७, ३० बैशाख मंगलवार
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक सुरू भएको छ ।
बैठकमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नियमित समय सोमबार हो । तर, सोमबार बैठक नबसेकाले आज बैठक बोलाइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् लकडाउन अवधिमा निषेध गरिएका क्षेत्र (सूचीसहित)
ट्याग्स: निवास बालुवाटार, मन्त्रिपरिषद बैठक